SIFOOYINKA CELOSIA SII KORDHAYA: BEERITAANKA GEEDO IYO DARYEELKA EE BANNAANKA U FURAN - SOOSAARKA DALAGGA
Sida loo koro celosia dalka
Celosia waxay leedahay sharaxyo kala duwan, maxaa yeelay waxay u egtahay mid aan caadi aheyn oo qurux badan. Luqad Latin ah, kelos eray, oo laga soo magacaabo Celosia deriska, macneheedu waa "gubasho, cadad." Waxay heshay magaca ubaxyada yar yar ee ugu kala duwan, laakiin midabyo aad u iftiin leh: dahab, guduud, casaan, cas, casaan, jaale ah. Ubaxiisa waxaa lagu uruuriyaa qaabka boogaha, dhareerka ama boogaha barafka leh, caleemaha ayaa lagu tilmaamay, lanceolate. Dhammaan saddexda kooxood ee dhirta waxaa ka mid ah ugu yaraan 60 nooc oo celosia ah. Laakiin in our area, bannaanka u koraan oo kaliya feathery iyo shanlooyin kala duwan. Maqaarka ayaa ka sii daraya.
Dhirta guryaha waa meelaha diirran ee Ameerika, Aasiya, Afrika, halkaas oo ay ku koraan sida geedo dilaacsan. Laakiin gobollada qabooba, sida kuwa kale, waxay ku koraan sannad ahaan, sababtoo ah ma noolaan karto jiilaalka. Sida loo koro celosnimada aagahayga, waxaan ku sharxi doonnaa wax dheeraad ah oo ku saabsan maaddada.
Beerto geedo Cellosia
Dhiibin geedka abuurka. Cellosia ayaa sidoo kale lagu faafin karaa goynta, laakiin kiiskan ayaa lumi doona saamaynta qurxinta. Tan iyo dhirta uu yahay thermophilic, waxa Germinates liidaa ciidda qabow oo uma dulqaadanayo dhaxan, waxaa ka wanaagsan inaad abuurto miraha horay u ah dhulka xiran. Ayadoo leh geedo waaweyn oo adadag ah, waxaad si ammaan ah u beeri kartaa beerta.
Diyaarinta abuurka ka hor beerashada
Waxyaabaha laga beerto celosia waxay leedahay xayawaan aad u cufan, sidaas daraadeed marxaladda koowaad ee ay sii kordheyso ka soo abuurka waxay u baahan tahay iyaga ka hor qashinka. Waxaa lagugula talinayaa inaad tan sameyso xalka "Zircon" iyo "Appin." Si hal galaas oo biyo ah, sii hal dhibic oo ah daroogo kasta, ku dar mashiinka xalka oo ku dhaaf 3-4 saacadood.
Waa muhiim! Gadashada miraha celosia, samee isku dar ah noocyo dhowr ah. Kadibna goobtii uu geedka la beeray, wuxuu noqon doonaa iftiin iyo ubaxeyn ilaa dayrta qabow.
Goorta iyo sida loo abuuro abuurka
Waxyaabaha lagu beeray waxaa lagu beeray dhammaadka bisha Maarso ama bilowgii Abriil ee aqalka dhirta kulul. Waxaad samayn kartaa iyada oo aan aqalka dhirta lagu koriyo, geedo sii kordhaya on loggias. Si kastaba ha noqotee, wakhtiga beerashada cellosia on geedo waxaa loo xisaabiyaa si marka marka la beeray dhulka u furan dhirta uusan ku hoos dhicin dhaxan.
Wixii beeridda, diyaariya baaquli yar oo leh dhulka iftiinka. Tusaale ahaan, isu-siman siman ee ciidda humus iyo vermiculite. Waxa ugu muhiimsan waa in carrada uu dabacsan yahay oo dhexdhexaad ah. Seeds waxaa lagu beeraa si aan caadi ahayn. Ma jirto baahi loo qabo in lagu rusheeyo lakabka carrada, si tartiib ah ugu riix oo u riix oo si fiican ugu buufin dhalada buufinta.
Markaad fahamsan tahay sida loo beerayo celosia, ka taxadar xaaladaha ku haboon ee biqilka. Si arrintan loo sameeyo, saxada leh qalabka beeraha lagu beeray waxaa lagu daboolay dhalooyinka ama filimka waxayna dhigeen meel quruxsan, laakiin waxay ka fogyihiin qorraxda tooska ah ee qorraxda. Waa muhiim in heerkulka hawada isla wakhtigaas lagu hayo 23-25ºC. Haddii heerkulka uu hooseeyo, biqilka abuurka ma noqon doono mid la jecleysto, qaarna xitaa ma awoodi doonaan inay daadiyaan maqaarka.
Caleemaha ugu horreeya waa inay soo baxaan illaa toddobaad, laakiin taariikhaha kama dambaysta ah waxay badanaa ku xiran yihiin xaaladaha biqilka iyo tayada wax lagu beerto.
Amaranth iyo beetroots waa qaraabo ah Cellosia qoyska reer Amaranth.
Geeddi waa mid aad u fudud-jecel, sidaas geedo u baahan tahay si ay u bixiyaan iftiin dheeraad ah. Haddii aad guriga ku korinayso, waxaad u baahan doontaa nalalka dhaadheer. Wixii beerashada aqalka dhirta lagu koriyo, sodium ama halogen ayaa loo isticmaalaa. Nalalka dheeriga ah waa inay ahaadaan ugu yaraan afar saacadood. Laakiin xitaa iyada oo la socota hirgelinta sprouts iftiin dheeraad ah si aad u sawirto. Tani waxay dhacdaa sababtoo ah taam aad u adag. Masaafada u dhexaysa dhirta waa in ay ahaataa ugu yaraan hal mitir, haddii kale geedo ayaa laga yaabaa inay u dhintaan cudurka lugta madow. Si looga hortago tani inay dhacdo, geedo waa in la qalajiyo, iyo ciidda waa in lagu waraabiyo xal of Fitosporin ah.
Wakhti ahaan waa lagama maarmaan in la nadiifiyo muraayadda ama filimka, ka saarida cufnaanta iyaga oo ka soo baxa weelka. Tani waxay ka hortagi doontaa dhacdooyinka cudurada fangas.
Si aan u dhicin dhirta, waa in lagu beeray dheriyo gooni ah horay. Laakiin haddii aad abuurtay miraha leh beerid joogto ah, marka laba ama saddex caleemo muuqan on sprouts, waa in la qodo. Si arrintan loo sameeyo, waxaa lagu shubi karaa jajabka 5 cm qoto dheer dhulka oo si sax ah u dhigma isku mid ah carrada fogaan ah 5 cm midba midka kale.
Ka dib markii dhirta qaato xidid, waxay ku quudiyaan xal fudud oo bacriminta adag ee ubaxyada.
Qaadashada labaad ee celosia waxaa la fuliyaa marka geedo xoog leh la aasaasay. Ka dibna, weheliyaan kubad dhoobo ah, waxaa lagu beeraa dheriga peat-humus ama weelasha kale ee shakhsiga ah. Oo mar labaad, marka geedo qaado xididka, waxaa la waraabiyaa quudinta isku mar.
Waa muhiim! Haddii aad ku koray geedo guriga, ka dibna ka hor beerashada dhulka u furan, waa in la adkaysto waqti dheer in lagu koriyo, haddii ay jirto suurtagal ah. Geedo waxaa la keenay bartamihii May. Sidaas darteed waxaad siineysaa ubaxa fursad ay ku horumariso.
Waxaa muhiim ah in aan ka badan yihiin iyo ku shub geedo, ma u dulqaadan xaaladaha noocaas ah. Xaaladdan waxaa lagu talinayaa in lagu daro vermiculite carrada.
Geedo beerto geedo dhulka ku furan
Ka dib markii geedo yihiin xoog leh ku filan, waxaad ku beeri kartaa dhulka furan, sameynta sariiraha ubax mustaqbalka leh bartilmaameed.
Waqtiga ugu fiican ee geedo beerto
Beerto celosia meel joogto ah waa la fuliyaa marka dhulku si fiican u kululaado, muhiim maaha in laga yareeyo barafka, heerkulka gudaha wuxuu noqon doonaa mid sare. Sida caadiga ah, waqtigaan ayaa yimid dhammaadka ah.
Xulashada goobta ee beerto
Markaad dooranaysid ubax beertaada, xusuusnow in uu jecel yahay iftiin badan oo aan u dulqaadan qoyaan xad dhaaf ah. Sidaa darteed, meel cad oo iftiin leh ayaa ku habboon, taas oo aan jirin wax qorshe ah iyo dabayl xoog leh. Carrabku waa in si wanaagsan loo miiro oo dhexdhexaad ah. Haddii ay tahay mid acidic ah, waa inaad marka hore ku dartaa lime.
Waa muhiim! Warshadu ma sameysanto organics cusub. Haddii aad rabto in aad ku buuxiso ciidda taas oo la qorsheeyey in ay ku beeri celosia, tani waa in la sameeyaa hoos geedka hore.
Sida loo abuuro geedo
Marka lagu beero geedo dhul furan, xusuusnow in geedka waa mid aad u nugul. Sidaa daraadeed, waxaa loo beddelaa meel joogto ah iyadoo loo marayo isku-baddasho - oo ay la socdaan dhoobo dhuleed ah oo ay ku dhajiyeen si fiican u diyaarsan. Haddii dheriga peat-humus loo isticmaalo qoob-ka-cayaar, waxaad ku soo celin kartaa iyaga.
Maqnaanshaha mashruuca waxay ku xiran tahay dhererkeeda. Marka la beerto shaybaarka dheer waa in ay ku haysaa masaafo u dhaxaysa geedo 25-30 cm midba midka kale. Wixii foorno ku filan 15-20 cm, ubaxyada ugu horeeya waa inay muuqdaan dhammaadka May, ubaxuna caadi ahaan wuu sii soconayaa illaa heerkulka cimiladu hoos u dhaco ilaa 1 ° C.
Sida loo daryeelo qalabka loo yaqaan 'coercia'
Inkasta oo dalabaadka laga rabo goobta koritaanka, celosia ma keenayso wax badan oo ku adag koritaanka iyo daryeesha. Waxaa muhiim ah in la xusuusto in aysan u adkeysan karin ciidda qoyan iyo xitaa iftiin iftiin leh. Heerkulka ka hooseeya 10 ° C, wuxuu ku kobcaa liidaa oo si xun u barbaaray. Heerkulka ku habboon waa 23-25 ​​° C.
Ubax sanadle ah, sida dahlias, zinnias, iyo asters, ayaa ku caawin doona in lagu qurxiyo goobta oo leh midabo kala duwan iyo muuqaalo.
Waraabinta, dabacsan iyo jaridda dhirta
Ururinta waraabinta dhirta, waa in aan xusuusanno in ay si fudud u dulqaadan karto abaarta, laakiin way awoodi kartaa u dhintaan marka ay jiraan xaddi qoyaan. Sidaa daraadeed, way ka fiicantahay inaad ilowdid in aad biyo qabatid, halkii aad mar kale ku dari lahayd biyaha. Xitaa haddii caleemaha ubaxa la lulay iyada oo ayan jirin qoyaan, waxay si deg-deg ah u imaan doontaa nolosha kadib markii waraabinta ugu horreysa. Laakiin iyada oo la'aanta biyo ubax joojiyo.
Waxaa lagula talinayaa in aad ubaxdo ubax oo kaliya subixii hore iyo biyo kulul. Habeenkii oo wax lagu waraabiyo waa wax xun. Iyadoo kulaylka xoog leh, bannaanka u soo jeedin ku buufin dhirta.
Cagaarka waxaa la sameeyaa inta lagu jiro xilliga koraya ee loo baahan yahay. Diirad dheeraad ah waa in la bixiyaa si loo dabciyo ciidda, sida ubaxa ma jecla kordhinta qoyaanka. Nidaamka waxaa la sameeyaa mar kasta oo ka dambeeya roobka ama waraabinta, ku sii qoto dheer dhulka oo aan ka badnayn 5 cm.
Bacrinta koowaad waxaa la sameeyaa horaantii marxaladda dhirta transplanting ee dhulka u furan. Si arrintan loo sameeyo, biyaha waraabinta ku dar bacriminta adag. Isticmaal dhaymahan ugu badnaan laba jeer bishii. Ha ku dhaafin bacriminta nitrogen, haddii kale jawab cagaaran ah ma helaysid ubaxyada la filayo ee loo yaqaan 'celosia'.
Ma taqaanaa? Celosia waxaa loo isticmaalaa ubax la qalajiyey. Si arrintan loo sameeyo, inta lagu jiro xilliga ubaxyada ubaxyada waa la gooyaa, caleemaha ayaa laga saaraa, iyaga oo ku xiran rucubood oo la qalajiyey gudcur, qolal qoyan oo si fiican u hawo leh. In iftiinka, waxay lumin doonaa midabkooda dhalaalaya.
Cayayaanka iyo cudurrada celosia, sida loo wajaho
Warshadu waxay ku xiran tahay cudurro badan oo caadi ah. Marxaladda seeding, lugta madow waxay soo dhaafi kartaa - madow oo salka hoose ee asliga ah, sababtoo ah caleemaha dhicid iyo dhimanaya. Wakiilka keena cudurkan wuxuu ku jiri karaa walxo kasta oo ciid ah, sidaas darteed ka hor inta beerto waxay tahay suurad wacan in jeermiska laga dhigo, tusaale ahaan, xalka xalalka potassium ama biyo karkaraya. Waxay sidoo kale u muuqataa ciidda cufan oo aad u cufan, oo leh hawo aan ku filnayn. Haddii cudurka la ogaado, sprouts ayaa saameeyey, carrada waxaa lagu rusheeyaa lakabka khafiifka ah ee jilif geed, iyo waraabinta ayaa la joojiyaa wakhti yar. Khatarta cudurada fungal waa in ay xiraan weelasha geedka, ka hortagga wareegga caadiga ah ee nafaqooyinka. Natiijo ahaan, caleemaha sagxadda dhirta, nidaamka xididka ayaa soo baxaya oo u dhimanaya.
Marmarka qaarkood ubax waxaa saameeya chlorosis, marka wax soo saarkooda chlorophyll lagu boodo geedka, sawiristaha ayaa la yareeyey, caleemaha ayaa huruud noqda oo hoos u dhaca. Haddii cudurku uusan keenin jeermiska, markaa waxaad la qabsan kartaa iyada oo lagu kobcinayo ciidda leh diyaar garowga birta.
Badanaa dhirta waxaa weerara aphid, taas oo lagu xakameyn karo cayayaanka ama daaweynta guriga. Diyaarinta labadii koob ee ugu dambaysay ee biyaha ah waxaad u baahan tahay inaad qaadato galaas saliid ah iyo 2 qaado oo saabuunta dareeraha ah. Maqaar ku buufin celosia leh xalkan fiidkii dhawr jeer dhowr jeer maalmo dhowr ah. Cayayaanka kale waxay leeyihiin wax yar oo xiiso leh ubaxa.
Marka goosashada iyo sida loo kaydiyo abuurka celosia
Dhamaadka ubaxka ah ee sanduuq ayaa ku yaala dhirta. Laakiin loogu talagalay uruurinta miraha laguma talin in la sugo badeecadda buuxda ee hawada u furan. Si aad u ururiso miraha warshad lagu beerayo sanadka soo socda, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo inflorescences oo ay ka baxdo gudaha dhismaha ka hor inta aan la qalajin. Waxaad jari kartaa caws dheer, ka nadiifi caleemaha oo ku rid mashiinka. Siduu ubaxu u engegay, wuxuu kugu farxi doonaa ubaxyo dhalaalaya.
Marka ay si buuxda u qalalaan, ruxin sanduuqyada kor ku xusan warqad. Dhamaan kuwa ku haray, waxaa lagama maarmaan ah in la boobo, dharbaaxo, abuurka lagu duubo sanduuq oo lagu kaydiyaa meel madow oo qalalan ilaa inta ay tahay wakhtigii lagu beeray. Maqaarka leh ubaxyo ayaa lagu soo celin karaa weelka waxayna ku tagi kartaa jiilaalka oo dhan.
Celosia waa ubax cajiib ah oo kugu farxi doona midabada dhalaalaya sanadka oo dhan. In cimilada diiran, ubaxyo qurxin doonaa beertaada, iyo xilliga qaboobaha, la qalajiyey afkoda leh ubax ku istaagi doona weel muddo dheer.
Horumarinta waa mid fudud haddii aad xusuusato in geedka quudiyo badan oo iftiin ah mana u dulqaadanayo xad-dhaaf ah qoyaan. Waxaa lagu faafiyaa by abuurka, sida ay lumiso qurxinta marka adoo raacaya. Baaxadda kala duwan ee noocyo iyo noocyo, labadaba qaabka iyo midabka ubaxa, ayaa ka caawin doona inuu soo nooleeyo beerta leh ubaxyo dhalaalaya oo muuqaal leh.